कृषिक्षेत्रको समृद्धिका आधार - Karobar National Economic Daily
कृषिक्षेत्रको समृद्धिका आधार
query_builderFebruary 6, 2017 9:20 AM supervisor_accountडा. कृष्ण पौडेल visibility2353
जनसंख्याको दुईतिहाइ मानिस कृषि पेसामा आश्रित छन् र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको एकतिहाइ योगदान छ । प्रकृति, भूमि र मौसमका हिसाबले दुनियाँले नेपाललाई भाग्यशाली मुलुकका रूपमा लिए पनि कर्म र योगदानका हिसाबले हामी अत्यन्त कमजोर तहमा खुम्चिएका छौं ।
कृषिक्षेत्र नागरिक समुदायको प्रत्यक्ष दैनन्दिनसँग सम्बन्धित छ । सबै मानिस प्राकृतिक र आधारभूत रूपले कृषि उत्पादनका प्रत्यक्ष उपभोक्ता हुन् । कृषिक्षेत्र कमजोर भइरहँदा गरिबी, बेरोजगारी, कुपोषण, स्वास्थ्य, पर्यावरणलगायत क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पर्छ ।
नेपालमा कृषिक्षेत्रमा ठूलो जनसंख्या सामेल रहे पनि परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । कृषिकर्ममा सामेल जनसंख्या आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको छैन ।
केही दशकअघि कृषिमा निर्यात क्षमता भएको मुलुक बिस्तारै कृषिउपजको बढ्दो माग, स्थानीय उत्पादनमा कमी र लागतवृद्धिका कारण खाद्यवस्तुको आयातको बढ्दो तथ्यांक कहालीलाग्दो छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कृषि उत्पादन मात्रै डेढ खर्बको आयात भएको छ भने पेट्रोलियम करिब ८६ अर्बको आयात भएको थियो । ठूलो जनशक्ति बिदेसिएको, जमिन बाँझिएको, प्लटिङ र गैरउत्पादनको क्षेत्रमा प्रयोगका कारण पनि उत्पादनमा वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।
कृषिमा विद्यमान परम्परागत र निर्वाहमुखी कार्यशैलीले व्यावसायिकतामा चुनौती खडा गरेको छ । सामाजिक संस्कार, उन्नत बीउबिजन, प्रविधि, सीप, यान्त्रिकीकरण, सिँचाइ, बजार, मूल्य र बिमालगायतका समस्याहरू किसानहरूले खेपिरहनुपरेको छ ।
परिणामतः कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको छ र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान पनि घटिरहेको छ । अत्यन्त विशाल सम्भावना बोकेको कृषिक्षेत्र समस्याग्रस्त रहे पनि आमूल सुधार नभएसम्म मुलुकले समृद्धि हासिल गर्न नसक्ने तीतो यथार्थ हाम्रो सामु छ ।
वैज्ञानिक भूमिसुधार र भूउपयोग नीति
एक निश्चित सीमासम्म मात्रै जमिन राख्न पाउने र जमिनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेलाई त्यसको मालिक बनाउने गरी वैज्ञानिक भूमिसुधारको आवश्यकता छ ।
बाँझो राखिएका र हदबन्दीभन्दा बढी जमिन अधिग्रहण गरेर सुकुम्बासी र श्रमजीवी किसानहरूबीच पु-याउने र सार्वजनिक उपभोगका लागि सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पुग्नुपर्छ । सबै प्रकारका जमिनको प्रचुर उपयोग र व्यवस्थापनका लागि पहिले भूउपयोग आयोग गठन गरी भूउपयोग नीति अघि तयार पर्छ ।
जमिनको वर्गीकरण, वितरण र उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्राकृतिक वनजंगलको व्यवस्थापनका अतिरिक्त खेती, पूर्वाधार, उद्योगधन्दा, आवास र सहरीकरणका लागि जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्छ ।
जमिन बाझिने र खेतीयोग्य जमिनमा प्लटिङले उर्वर खेतीयोग्य जमिन नष्ट भइरहेको छ । दिन–प्रतिदिन ससाना टुक्रामा खण्डीकृत जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । जमिन खेतीका लागि मात्रै नभएर पशुपन्छीपालन, माछापालन, बजार, उद्योग, प्रशोधन र वितरणका लागि पनि व्यवस्थापन हुनुपर्छ ।
कृषि इनपुटको व्यवस्थापन
किसानको खेती र जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउनका लागि त्यसको इनपुटलाई सहज बनाउनुपर्छ । जमिन र मौसमको आधारमा खेती गर्न परामर्श दिने, माटोको उपयुक्त परीक्षण, अत्याधुनिक यन्त्र तथा उपकरण, पर्याप्त पुँजी, ऊर्जा, उन्न्नत बीउबिजन, पर्याप्त सिँचाइ र योग्यतम जनशक्तिको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । यो खालको वातावरण र व्यवस्थापनको दायित्व राज्यको हो ।
कृषिक्षेत्रमा लगानी राज्यको प्राथमिकता हो । तर, किसानले प्रत्यक्ष रूपमा त्यो प्राथमिकताको लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । खेतीयोग्य जमिनको दुईतिहाइ हिस्साले सिँचाइ सुविधा पाउन सकेको छैन ।
जलस्रोतको दोस्रो धनी देशमा रहेका नदीको पानीलाई नहरकुलोमार्फत सिँचाइको पर्याप्त सम्भावना छ । बढ्दो वन–वातावरण विनाशका कारण सिँचाइका लागि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको छ ।
त्यस्तै पशुपन्छीपालनका लागि आवश्यक इनपुटको सहजीकरण राज्यले गर्नुपर्छ । उत्पादनवृद्धि र गुणस्तरीयताका लागि उन्नत प्रविधि, तरिका र सीपको प्रवद्र्धनमा पनि राज्यको ध्यान जानुपर्छ ।
औद्योगीकरण र व्यवसायीकरणमार्फत कृषि प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । अर्थतन्त्रको विविध आयामसँगै कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी र परिपूरक रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
व्यवसायको अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषिक्षेत्रमा बृहत् खेती र कृषिजन्य उद्योगमा ठूलो लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ अर्थात् कृषिलाई उद्योगका रूपमा अघि बढाउँदै संरक्षित गर्नुपर्छ ।
अन्न, फलफूल, दूध, मासु, माछा र अन्य कृषिजन्य वस्तुहरूको पकेट क्षेत्र तय गरी नमुना उत्पादनक्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सके आत्मनिर्भरताको शृंखला विकास हुन सक्छ ।
अझ सामूहिक कृषि उत्पादन प्रणालीमार्फत कृषिको व्यवसायीकरण, रोजगारी र आय विस्तारमा व्यापक योगदान पुग्न सक्छ । कृषिलाई संरक्षित र प्राथमिक उद्योगका रूपमा मान्यता दिएर अघि बढाउनुपर्छ ।
कृषिलाई व्यापक औद्योगीकरण गर्न र सीमान्तीकृत किसान परिवारलाई आकर्षित गर्नका लागि राज्यले प्रत्यक्ष अनुदान र प्राविधिक सहयोग तथा विभिन्न सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
मूल्य र बजार
किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य र बजार प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यातायात र पूर्वाधारको कमीका कारण समयमा उपभोक्ताकहाँ पु¥याउन कठिन छ ।
त्यसमा पनि वितरण च्यानलमा संलग्न बिचौलियाहरूका कारण किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सक्दैनन् भने उपभोक्ताले महँगो मूल्य तिर्नुपरिरहेको छ । वितरण केन्द्र र प्रणालीमा तिनै किसानको स्वामित्व र संलग्नता जरुरी छ ।
किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने र वितरण प्रणालीलाई सरल र छोटो बनाउने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ ।
अनुसन्धान, शिक्षा र तालिम
परम्परागत सोच र चिन्तनको तहबाट अघि बढ्नका लागि अध्ययन, अनुसन्धान, शिक्षा र तालिमको आवश्यकता पर्छ । कृषिप्रधान मुलुकमा प्रत्येक नागरिकले कृषिको सन्दर्भमा आधारभूत ज्ञान राख्नुपर्छ ।
प्राथमिक शिक्षादेखि नै कृषिलाई जोड्ने, उच्च शिक्षा क्षेत्रमा कृषिजन्य प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा विशेष प्राथमिकता जरुरी छ । किन आज भावी पुस्ता डाक्टर, इन्जिनियर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट वा बैंकर बन्ने चाहना मात्रै बन्न चाहन्छन् ? सक्षम किसान, कृषि उद्यमी, व्यवसायी वा अनि कृषि प्राविधिक वा वैज्ञानिक बन्छु भन्न किन चाहँदैन ? खोजी र प्रोत्साहनको विषय बन्नुपर्छ ।
विज्ञान र प्रविधिको तीव्रतर विकासले हरक्षेत्रमा अध्यावधिक रहन दिने प्रेरणा र खोज कृषिक्षेत्रमा पनि स्थापित हुनुपर्छ । नयाँ–नयाँ बीउबिजन, उत्पादन तरिका र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि नियमित अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगमा ल्याउने कुरामा पनि ध्यान जानुपर्छ । यसमा राज्यले कृषिक्षेत्रको लगानीको हिस्सा बढाउनुपर्छ ।
वित्त बिमा र सुरक्षा
किसानलाई खेती, पशुपालन र अन्य कृषि उद्यम गर्नका लागि आवश्यक पुँजीको सहज र सुलभ प्रबन्ध हुनुपर्छ । नागरिकता र योग्यताको प्रमाणपत्रकै आधारमा न्युन ब्याजदरमा बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीबाट राज्यले ऋणको सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।
कुनै पनि पौरखी किसानलाई कृषिजन्य उद्यम, व्यवसायका लागि पुँजीको अभाव महसुस गर्न नपरोस् । कृषिक्षेत्रमा आकर्षण र सुरक्षाका लागि बिमा, पेन्सन र अन्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ ।
बाली, पशुपन्छी, माछा, दूध तथा अन्य कृषिजन्य आम्दानीको सुनिश्चितता र कुनै पनि प्रकारको भारी नोक्सानीबाट किसानलाई मुक्ति दिनका लागि राज्यले किसान कल्याणकारी बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
लागत सहभागिताका आधारमा किसानलाई पेन्सन, जीवनबिमा र स्वास्थ्यबिमा दिन सकिन्छ । यसले किसानहरूलाई आफ्नो कर्ममा आकर्षित गर्नेछ र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनेछ ।
नेपालमा जडीबुटी, वनपैदावर र अन्य कृषिजन्य उत्पादनका विशाल सम्भावनाहरू छन् । कृषि पर्यटन पनि किसानको आयस्रोतको आधार बन्न सक्छ । कृषि परामर्श, तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान र अन्य सेवाहरू कृषिको परिपूरक पेसाका रूपमा अघि बढ्न सक्छ ।
त्यस्तै कृषिमा बढ्दो रासायनिक मल र विषादीको प्रयोगलाई निरुत्साहित बनाउन ध्यान दिनु त्यत्तिकै जरुरी छ । नेपालमा कृषिक्षेत्रमा आमूल रूपान्तरण गरेर मात्रै समृद्धि ल्याउन सकिन्छ ।
केवल सीमित राजनीतिक कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारीलाई पोस्ने कार्यक्रम होइन कि समस्त सीमान्तीकृत किसान परिवारबीच पु-याउने, ४० लाखभन्दा बढी बाहिरिएका अधिकांशतः किसान युवाहरूलाई स्वदेशमै उद्यम, व्यवसाय गर्ने र कृषिलाई समाजवादोन्मुख र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणमा आकर्षित गर्ने गरी कृषि नीति र कार्ययोजना ल्याउनुपर्छ ।
किसानको जीवनस्तर र कार्यप्रणालीमा सुधार ल्याउने, उत्पादनमा मात्रा र गुणका हिसाबले भारी वृद्धि गर्ने र सबैको खाद्यसम्प्रभुता सुरक्षित गर्ने र समग्रमा दिगो विकास लक्ष्यको महŒवपूर्ण आधारस्तम्भ हुने गरी कृषिक्षेत्रको व्यापक सुधारका लागि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
किसानहरू पनि सहकारी संगठित भएर उत्पादन, वितरण र औद्योगीकरणको हितमा लाग्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । नीति निर्माता गम्भीर र परिणाममुखी बनून् र लक्षित समुदायको प्रत्यक्ष सरोकार, लाभ र रूपान्तरणको विषय बन्न सकोस् ।